ကနေဒါမှအံ့မခန်းဖွယ်မြောက်ပိုင်းအလင်းများ '' မုန်တိုင်း '' ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
ပုံနှင့်ဗီဒီယို - ကနေဒါနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလင်း၏အံ့မခန်းဖွယ်»မုန်တိုင်း»
မော်နီကာဆန် | | ရုပ်ပုံများ, ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
မြောက်ပိုင်း Lights သည်ဆောင်းရာသီ၏အထင်ရှားဆုံးသဘာဝအကြည့်များဖြစ်သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံသားများသည်ဆောင်းရာသီအပန်းဖြေစခန်းနှင့်နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်ပျော်မွေ့နိုင်သောမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောပွဲ NASA သည်ပုံရိပ်ကို« day-night band »နှင့်ဖမ်းယူခဲ့သည်။ သင့်ရဲ့ VIIRS တူရိယာ (DNB) Suomi NPP ၏ဂြိုဟ်တု (မြင်နိုင်သောအနီအောက်ရောင်ခြည် Imagin Radiometer Suite သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာဖြင့်မြင်နိုင်သော Infrared Radiometer) ။
DNB သည် Auroras၊ လေထုအလင်းရောင်၊ ဓာတ်ငွေ့မီးရောင်များနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည့်အလင်းရောင်စသည့်အလင်းရောင်အချက်ပြမှုများကိုစစ်ဆေးသည်။ ထိုအချိန်တွင်သူသည်ကနေဒါမြောက်ပိုင်းတွင် aurora borealis "မုန်တိုင်း" ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
1 ဘယ်လို auroras ဖြစ်ပေါ်?
ဘယ်လို auroras ဖြစ်ပေါ်?
Auroras များသည်တောင်စောင်းနှင့်မြောက်ဘက်နှစ်မျိုးလုံးတွင်ရှိသောပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်တောင်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်သောအခါ၎င်းတို့ကိုတောင်ပိုင်း Auroras အဖြစ်လူသိများပြီးမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းတွင်မြောက်ဘက်အလင်းများဟုခေါ်ကြသည်။ နှစ်ခုလုံး နေမှလေသည်ကမ္ဘာ့သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့်တိုက်မိသောအခါဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်စွမ်းအင်သည်အတွင်းသို့စုဆောင်းသိုလှောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သံလိုက်စက်ကွင်းလိုင်းများသည်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်။ ရုတ်တရက်ထုတ်လွှတ်သည်အထိအီလက်ထရွန်များကိုကမ္ဘာဂြိုဟ်သို့ပြန်ပို့သည်။
ဤအမှုန်များသည်လေထု၏အထက်ပိုင်းနှင့်တိုက်မိသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ခေါ် aurora ခေါ်ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည်ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများ၏ကောင်းကင်ကိုရောင်စုံဖြစ်စေသည်။
သူတို့ဘယ်လိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာငါတို့သိပြီ။ သူတို့ပျော်မွေ့ကြစို့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုင်များနှင့်ဝေးနိုင်သော်လည်းအနည်းဆုံးဗီဒီယိုများအမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။ နှင့်သင်တန်း၏, ဒီတစ်ခုကယ့်ကိုအထင်ကြီးစရာပါ:
ကနေဒါလူမျိုးတွေဟာအရောင်အသွေးစုံလင်လှတဲ့ဒီနှစ်ရဲ့အအေးဆုံးရာသီကိုအစပြုခဲ့မှာသေချာတယ်မဟုတ်လား။ မြောက်ပိုင်းအလင်းများသည်များစွာသောအာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကသူတို့ကိုတွေ့ဖို့ကံကောင်းမယ်ဆိုရင်သင်ဟာအံ့အားသင့်မှာသေချာတယ်။ ၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုနှင့်အရောင်များသည်ကံကောင်းထောက်မစွာပင်၊ အမှန်တကယ်ဖြစ်သောအိပ်မက်တစ်ခုမှယူထားပုံရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ပုံနှင့်ဗီဒီယို - ကနေဒါနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအလင်း၏အံ့မခန်းဖွယ်»မုန်တိုင်း»